WOWOW 8 In. Baahiyaha 2-Gacanta Biyaha Musqusha Chrome
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Qasabadaha Musqusha oo Fidsan / WOWOW 8 Gudaha. Baahin 2-Qabashada Qasabada Musqusha In Chrome
Amazon US Amazon MX Tilmaamaha Rakibaadda PDF
Weligaa qaabaynta: Tubada musqusha qalinka ah ee muraayadda u eg chrome, qaab aan waxba tarayn oo aad u qurux badan, ka dhig musqushaada mid aad u sareysa
Abuur deg deg ah oo lagu shubo: dhismo degdeg ah oo gaar ah, biyaha kulul iyo qabow waxaa lagu qasi karaa tuubo degdeg ah oo aan lahayn wiish, iyada oo loo marayo farsamo si looga hortago in tuubada dillaacdo
2 HANDLES 3 PIECES WIDESPREAD BADIN BASIN BASIN: labajibbaaran, naqshadeynta 3 qaybood waxay ku habboon tahay xakamaynta saxda ah ee mugga iyo heerkulka biyaha labadaba, sidoo kale meesha rakibidda waa la hagaajin karaa
Nashqadeynta Balaadhinta La Hagaajin Karo: 4 -16" tubooyinka musqusha ee baahsan 3-dalool buur, fogaanta rakibida waxaa lagu hagaajin karaa shuruudaha, ku haboon guri kirada, kondho cusub, hal aqal, guri matoor, trailer safarka, iyo isticmaalka qoyska
DAMMAAN, TAAGEERADA Macaamiisha: Dammaanad 3 sano ah iyo taageero macmiil ayaa la bixiyaa. Waxaa daboolay soo noqoshada 90-maalmood. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto.
Musqusha tubbada qubayska chrome 2 gacanta 2320300C
Qubayska musqusha ee baahsan ayaa xaqiiqdii taabanaya bilicda musqusha kasta. Faa'iido kale oo weyn oo ah tubbada musqusha ee ballaaran 2 gacanta ayaa ah inaad awood u leedahay inaad dhex gasho qulqulka biyaha marka loo eego rabitaankaaga saxda ah. Qubeyska 2-gacmeedka musqusha wuxuu kuu oggolaanayaa inaad shaqsiyan u xakameyso biyaha kulul iyo qabow si shaqsiyan ah, oo ay kujirto qulqulka qulqulka. Sidaas awgeed, waligaa qalad sameyn doontid mar labaad oo aad luminaysid biyo kulul adigoo aan runtii u baahnayn. Ama ka sii dara, inaad gacmahaaga ku gubto biyo kulul. Sidaa daraadeed gacmaheena tubbada biyaha ee loo yaqaan 'chrome 2' muraayadaha gacmeedku waa xalka musqulaha oo aamin ah.
Qasabadda musqusha arc sare oo leh 7-naqshad gaar ah, hubaal waxay siinaysaa taabasho gaar ah musqusha kasta. Naqshadayaasha WOWOW ayaa si weyn loo yaqaan inay mar walba raadiyaan naqshado geesinimo leh si ay isbeddel ugu sameeyaan qasabadaha musqusha. Sidaa awgeed, qasabadaha musqusha ee WOWOW mar walba way ka yara duwan yihiin qasabadaha musqusha ee kale ee aad heli doonto. Taasi waxay kaa caawineysaa inaad siiso musqushaada qurxin gaar ah oo gaar ah. Dhinacan gaarka ah waxaad sidoo kale ka heli doontaa chrome qasabadda musqusha 2 gacan oo WOWOW. Qasabaddan musqusha ayaa hubaal ah inay si weyn u hagaajin doonto musqushaada.
Ku xiridda mashiinka qasabada musqusha chrom 2 gacanta
Si aad u rakibto tubbada tuubada musqusha 2 chrome 3 waxaad u baahan tahay musqul 4 god leh. Guud ahaan, godad horay loo isticmaali jiray oo loogu talagalay labada gacan ayaa lagu meeleeyaa 4 inji laga bilaabo tuubbada lafteeda. Laakiin waad dooran kartaa masaafada aad adigu iska leedahay haddii aadan haysan musqusha qubayska oo la sii daayay. Gacan-galada waxaa la dhigi karaa 16 ilaa 1 oo laga soo gelin karaa tuubada lafteeda. Markaa adiga ayay ku saaran tahay inaad go'aansato masaafada saxda ah. Si aad u rakibto gacanta waa inaad ubaahantahay kaliya labo god oo dheeri ah oo ah 1,5 ilaa 1,2 inji ah. Dhumucda saxan saxarada ah waxay noqon kartaa ilaa XNUMX inji.
Qulqulka musqulaha biyaha ee WOWOW chrome 2 ayaa waxaa loogu talagalay dhisme iskuxiran oo gaar ah. Biyaha kulul iyo qabow waxaa lagu dhejin karaa isku xir deg deg ah ayadoon la isticmaalin kabka. Farsamadan cusub awgeed, waxaad ka hortegi doontaa tuubooyinka biyuhu inay dillaacaan. Qubayska qubayska musqusha wuxuu la imanayaa xirmo dhammaystiran, oo ay ku jiraan xirmo tuubooyin isku-xir degdeg ah iyo khadad biyo dheeraad ah oo dheeri ah. Qalabkaan rakibaadda waxaad ku rakibi kartaa mashiinka tubbada biyaha ee chrome 2 adiga naftaada adoon shaqa gelin tuubbiile. Waxaad si weyn u badbaadin doontaa ku rakibidda kharashaadka raacitaanka fiidiyowga fudud ee WOWOW. Rakibaadda waxaa lagu sameyn karaa 30 daqiiqo gudahood iyadoo aan wax dhibaato ah dhicin. Taasi ma fududa?
Naqshadeynta musqulaha musqulaha chrome 2 gacanta
Qolka musqusha buluuga ah ee chrome 2 ayaa leh naqshad qulqulaya oo leh meel siman oo umuuqan doonta wax la yaab leh nooc kasta oo musqusha ah Levers-gacmeedka laba-gacmeedka leh ayaa ku siinaya xakameyn fudud. Levers waxay u muuqdaan kuwo la yaab leh oo leh xariiqyo toosan iyo naqshad ergonomik. Kireystayaasha ayaa si ku habboon u cabbirmaya taas oo ka dhigaysa kuwo ku habooneyd in la xakameeyo oo raaxo leh in la leexiyo. Waad ku shaqeyn kartaa kabayaasha si xoogaa yar dadaal ah oo aad si sahlan u xakameyn karto socodka biyuhu qaab aan xad laheyn. Ka sokow, tubbada musqusha lafteeda ayaa loo rogi karaa 360 digrii, si ay kuu siiyaan raaxo ugu badnaan inta aad isticmaaleyso tubbada qubayska, ama marka aad nadiifineyso musqusha qubayskaaga.
Qasabadda musqusha ee lacagta ah oo leh 2 gacmood ayaa bixisa dhammaystirka chrome oo muraayad u eg. Qaabkan loo yaqaanno wax aan waxba tarayn waa mid aad u wanaagsan oo sidaas darteed si gaar ah ugu habboon qurxinta musqusha casriga ah. Tani qasabada musqusha chrome si khafiif ah ayaa loo miiray si loo taabto xarrago leh musqusha musqusha chrome 2. Qaybta guud ee dhaldhalaalaan ee chrome ayaa yara yara yaraaday si loo bixiyo muuqaal gaar ah. Sidaad arki karto, WOWOW waxay raadisaa habab kala duwan si qurxinta musqushaada looga dhigo mid gaar ah oo gaar ah.
Gacan-qabatinka musqusha chrome 2 tayo sare leh ee suuqyada-sare
Qalabka musqusha qasabadda musqusha 2 gacmeed ee WOWOW hubaal waa suuqa ugu sarreeya. Kaliya qalabka birta adag ayaa loo isticmaalaa sida birta birta ah, naxaasta iyo isku darsamida zinc. Tani waxay hubineysaa tayo sare iyo adkeysi nolol dheer. Qalabkan biraha adag ayaa hubaal ka sarreeya heerarka guud ee warshadaha. WOWOW xitaa waxay isticmaashaa qalab tayo fiican leh marka loo eego qaar ka mid ah A-magacyada lagu yaqaan suuqa. Qalabkan birta ah ee waara, WOWOW wuxuu dammaanad ka qaadayaa musqusha tubada chrome 2 gacmeedyada oo aan la jabin doonin Gaar ahaan isku xiraha naxaasta, xudunta naxaasta iyo lowska naxaasta ah ayaa sameeya midnimo midaysan oo adag oo aan lahayn daxal. Ka sokow, qalabkani wuxuu hubiyaa inuu
ilaali tayada biyaha oo markaa caafimaadka adiga iyo qoyskaagaba.
WOWOW musqusha tubada chrome 2 gacmeedyada waxay la imaaneysaa boor bulsheed oo bogaadin ah sidoo kale. Sidan ayaad u qaabeyn kartaa musqushaada suuliga mid midnimo dhan. Bakhaarka ka soo baxa bullaacadda ayaa si fudud loogu hawlgeli karaa taabashada yar ee fartaada. Sidan ayaad u oggolaan kartaa biyaha oo dhan inay si fudud u socdaan. Iyo iyada oo aan lahayn wax buuq ah oo dhib leh sababta oo ah naqshadeeda cusub.
Gacan-qabashada musqulaha musqusha ee khatarta lahayn ee 'chrome 2' gacanta
Aorator-ka heerka-sare ee Neoperl wuxuu ku siinayaa socod biyo fudud oo jilicsan. Sababtoo ah xakameynta socodka biyaha ee cusub awgeed, waad ka xoroobi doontaa biyo daadinta markaad isticmaalayso qasabada musqushaada. Maaddaama si casri ah loo qaabeeyey, waxay sidoo kale kaa badbaadinaysaa in ka badan 50% isticmaalka biyaha. Sidaa darteed waxaad awoodi doontaa inaad ku dhimeyso qarashka biyahaaga sidoo kale WOWOW musqusha tubada chrome 2 taakulada. Aorator-ka 'Neoperl aerator' waa mid lakala goosan karo oo si fudud ayaa loo nadiifin karaa ama loo badali karaa naftaada.
Maaddaama WOWOW ay ku siineyso qiimaha ugu fiican ee lacag leh musqusha qolka musqusha chrome 2, waxaan ku kalsoonahay inaan ku siino muddo 3-sano oo dammaanad ah. Waxaan aragnay macaamiil badan oo soo laabanaya oo iibsanaya qasabaddeenna musqusha mar labaad, qasabaddan musqusha gaarka ah ayaa sidoo kale lagu dabaqay goobo badan oo dadweyne ah sidoo kale. Sidaa darteed ujeedkeena tayada ugu fiican waxaa xaqiijiyay macaamiisheena caalamiga ah. Waxaad ku daboolan tahay dammaanad lacag celin ah oo 90 maalmood ah markaad iibsanayso qasabadda musqusha. Haddii aadan ku qancin doonin qasabadda musqusha chrome 2 gacanka, waxaad heli doontaa lacag celin buuxda oo aan su'aalo lagaa weydiinin. Marka waad iibsankartaa musqusha qasabadkeena musqulaha 2 gacmeed 100% halis la'aan!
Faa'iidooyinka ka mid ah chrome qasabadda musqusha 2 koob oo kooban:
Qubayska musqusha oo si aad ah loogu naqdiyay
Touch Qalabka miiska ee chrome aan caadi aheyn
Way fududahay in la hawlgalo
Laga sameeyey alaab naxaas ah oo aad u weyn
SKU: 2320300C Categories: Qasabadaha Musqusha oo Fidsan, Qubeyska Musqusha Tags: Heerka Ameerika, xamili baahsan, lever gacanta